Shir Gudoonka Golaha Wakiilada Somaliland oo Gacanta isula tagay – Radio Daljir
Seteembar 12, 2015 11:36 b 0
Sabti ,12,Sept,2015,(Daljir)_Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta isku faro saaray Kalfadhigii Golaha oo Xildhibaanada Muxaafadku soo gudbiyeen mooshin lagu Taageerayo Heshiishka Xukuumaddu la galayso Shirkaddo gaar ah oo ay ku Wareejinayso Haamaha Keydka Berbera.
Fadhigii maanta waxaa Shir-gudoominayey, C/raxmaan Cirro oo ay hareerihiisa Fadhiyaan labadiisa ku xigeen, ayaa halkaasi ka soo jeediyey mooshin ay xildhibaanadda muxaafadku soo gudbiyeen oo ay ku saxeexan yihiin 38 xildhibaan, waxaanu golaha u sheegay in xeer hoosaadka goluhu dhigayo in mooshinnada noocan ah lagaga doodo kalfadhiga dambe golaha wakiilladda, sidaasna fadhiga maantu ku xidhan yahay.
Balse, Guddoomiye xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax, ayaa makarafoonka ku qabsaday Guddoomiye Cirro, ka dib markii uu ka biyo diiday xadhitaanka fadhiga, isla markaana doonayey in mooshinka la guddo gallo, taasina waxay keentay in Makarofoonka isku qabsadaan labadan masuul.
“Guddoomiye xigeenku waa inuu ixtiraamo golaha wakiillada iyo Xeer-hoosaadka Golaha. Haddii Golaha Wakiilladu yeesho laba Guddoomiye, Dalkuna Wuxuu yeelan doonaa laba Madaxweyne.”ayuu yidhi Guddoomiye C/raxmaan Cirro oo ka cadhaysan codbaahiyaha uu ku xigeenkiisa ku qaysto.
“Guddoomiye hadaad kacayso iyo hadaad fadhiyayso adagi ayay ku jirtaa Golahuna waa uu Fadhiyayaa,Waana La codaynayaa,Xildhibaanada Kulmiye aniga ayaa Guddoomiye u ah,Mana kici karaan”ayuu yidhi Baashe oo u jawaabayey Cirro.
Xigasho.Barkhad Ladif Cumar ,HOL